December 2012 ~ Zawlin IT World
9:26 AM windowဆိုင်ရာ No comments
ဒီရက်ပိုင်း Windows Genuine မဖြစ်တာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး တော်တော်များများ မေးကြတာ တွေ့ရပါတယ် .. မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Windows က Genius မဖြစ်တော့ဘူး .. ဆိုရင် အခုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Windows_Loader_v2.1.1 ကိုအသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်း နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. Windows7အသုံးပြုသူတိုင်း မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool တစ်ခုပါပဲ .. ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Windows တွေအများစုက Microsoft ကနေ တရားဝင် ၀ယ်ပြီး အသုံးပြုတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် တစ်ချိန်ချိန်မှာ မိမိတို့
Mozilla Firefox Home page chane ခြင်းနှင့်မြန်မာဖောက်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း
9:21 AM internet browser ဆိုင်ရာ No comments
ကို Myo Zaw နှင့်အတူအခြားမသိသေးသောသူများပါနားလည်အောင်ပုံနှင့်တကွရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်
ပုံမှာမြားပြထားသာကိုကိုနှိပ်ပြီး options ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ
General ရဲ့Home page မှာ http://www.google.co.th/ copy ကူးပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် ok နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပါပြီး
9:16 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
Android ဖုန်း/Tablet ဆော့ဝဲတွေကုို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးလုို့ရစေတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ Android ဖုန်း/Tablet မရှိသူတွေလည်း android app တွေကုိုသုံးစွဲနုိုင်ပြီ။၏။
BlueStacks App Player ကုို Window အတွက်နဲ့ Mac အတွက်နှစ်မျိုးရွေးချယ် download ရယူနုိုင်ပါတယ်။
BlueStacks ဟာအဓိကအားဖြင့် Android ဂိမ်းတွေကို Smartphone မှာ
ခဏခဏ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် ပြုလုပ်တာ ညည်းငွေ့ သူတွေနဲ့ 
9:13 AM windowဆိုင်ရာ No comments
Digital Life Journal (08-Oct-2012) (အတွဲ-၁၊ အမှတ်-၂၃
9:11 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေနေတဲ့ Digital Life ဂျာနယ်ကိုနည်းပညာလေ့လာ
9:08 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်သွားပေးပါ့ မယ်ဗျာ။နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ်ထွက်တိုင်းတင်ပေးသွားပါမယ်အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol-1 ,
Digital Life Journal (01-Oct-2012) (အတွဲ-၁၊ အမှတ်-၂၂)
9:06 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-72 (1.10.12)
9:04 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်ပေးသွားပါ့မယ်နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-72 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 1ရက်နေ့ထွက် Updateလေးပါ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
Gmail Account ခိုးကြည့်နည်း
8:59 AM gmail gtalk ဆိုင်ရာ No comments
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကိုယ့်ရှေ့က ကိုယ်ထိုင်မယ့်စက်ကနေ ထသွားတဲ့ ကောင်လေး/ကောင်မလေးရဲ့
ဂျီမေးလ်ကို ခိုးကြည့်တဲ့နည်း သင်ပေးမယ်နော
(အဟဲ..နောက်တာပါ…)ကျွန်တော်တို. Gtalk သုံးတဲ့အခါမှာတော်များများကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံး တာများ
GTALK မှာအကောက်များများ တပြိုင်တည်း ဖွင့်သုံးဖို့
8:55 AM gmail gtalk ဆိုင်ရာ No comments
အချို့သောသူတွေ gmail account နှစ်ခု သုံးခု ရှိတက်ကြပါတယ်။ ရှိထားတဲ့အလျောက် ရှိသလောက် ကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖွင့်လိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပြူတာ အသစ်မှန်ရင် အဲ့လိုလုပ်တာကို လက်မခံပါဘူး။ လုပ်လို့မရပါဘူး။ သိပြီးတဲ့ လူတွေလည်းရှိမယ်။ မသိသေးသူတွေလည်း ရှိပါမယ်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ Gtalk တွေအများကြီး
GTALK မှာ မြန်မာစာ ပြဿနာဖြစ်နေသူများအတွက်
12:09 AM gmail gtalk ဆိုင်ရာ No comments
Gtalk စ သုံးသူတိုင်း မကြာခဏ ကြုံတွေ့ဖူးကြတဲ့ ပြဿနာလေးပါကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်ဒီ ပြဿနာကို ဒီလိုလေး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
12:06 AM software မြို့ တော်, video covrerter No comments
camera နဲ. video ရိုက်ထားတာကို အခွေပြန်လုပ်တဲ.software လေးလိုချင်လို.ပါဆိုလို့ အကိုတစ်ယောက်ကတောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။video တော်တော်များကိုSupportလုပ်ပေးပါတယ်
12:02 AM internet downloadmanger, software မြို့ တော် No comments
အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်တဲ့ Internet Download Manager (IDM) လေးပါ ... ဒါကတော့ ဘာမှ ထပ်လုပ်ပေးစရာ မလိုတော့တဲ့ Just Double Click ပါ...IDM အတွက် သိပ်ခေါင်းစားမခံချင်သူများအတွက် Uplate အသစ်ထွက်လာလိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Uninstall လုပ်နည်း နဲ့ Install လုပ်နည်းလေးကိုအသေးစိတ်သိချင်တော့
Internet Download Manager hasasmart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Unlike other download accelerators and managers that segment files before downloading starts, Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during
g talk ဖုန်းပြောတာ ဒီကပြောတာမကြားရဘူး ဟိုကပြောတာကြားရတယ် ဆိုတဲ့ ပြသနာလေးဖြေရှင်းနည်း
11:57 PM gmail gtalk ဆိုင်ရာ No comments
window7ရဲ့Gtalk မှာ တဖက်ကပြောတာကိုကြားရပြီးကိုပြန်ပြောတာကိုမကြားရတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းပါ။
(၁)control panel / sound/recording ကိုဝင်ပြီး microphone ပုံလေးကို double click ပေးလိုက်ပါ၊
AnyReader v3.11 Build 1060 ( Install လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်)
11:50 PM Recover softwar, software မြို့ တော်2comments
အစင်းရာဖြစ်နေတဲ့ ကောင်းစွာစွာ မဖတ်နိုင်တော့တဲ့ copy လုပ်လို့မရတော့တဲ့ CD/DVD ထဲက data တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖတ်ပြီး copy လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ AnyReader လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ။် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အောက်ဆက်နဲ့ တောင်ဖွင့်လို့ မရတော့တဲ့ DVD အခွေနဲ့ စမ်းတတ်ပြီးမှတင်ပေးလိုက်တာပါမိမိတို့ ၏ file size
WiFi Hacker For S60v5 And S^3(for nokia)
11:45 PM Hackingဆိုင်ရာ, mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, software မြို့ တော်2comments
ဟက်ရလား မရလားဆိုတော့ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ ရရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ အကိုတစ်ယောက်တောင်းထားတာလေးပါ
11:42 PM software မြို့ တော်, video covrerter No comments
ကျွန်တော်အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Format Factory ကို update လေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Window အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာပြီး download ယူလိုက်ပါခင်ဗျာ
11:37 PM internet downloadmanger, software မြို့ တော် No comments
iDhamma(ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ် နှင့် မေတ္တာပို့) software လေးပါ
11:27 PM iphone ဆိုင်ရာ No comments
iPhone အတွက် မြန်မာဘာသာနဲ့ iDhamma(ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ် နှင့် မေတ္တာပို့) software လေးပါ
၂။ ကွန်ပျူတာသုံး မော့စ် (mouse) ကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူမှာ Doug Engelbart ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်က ဖြစ်ရာ သစ်သားဖြင့်
10:00 AM Antivirus, Cleaner software, software မြို့ တော် No comments
ကျွန်တော်အခု Malware တွေဖြစ်တဲ့ Trojan Horses, Worms, Adware, Spyware စတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ ရန်က ကာကွယ် နိုင်အောင် ဒီကောင်လေးကို တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေတဲ့ အပြင်ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ Standard antivirus programs တွေဟာလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း
9:58 AM Antivirus, Cleaner software, software မြို့ တော် 1 comment
9:54 AM windowဆိုင်ရာ No comments
ကျွန်တော်အခု WinUSB Maker လေးတစ်ခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကို ဘယ်လိုနေရာတွေများအသုံးပြုကြလည်းဆိုရင် Window ကိုအခွေနဲ့မတင်ဘဲနဲ့ USB နဲ့တင်ချင်သူများအတွက်အထူးရှယ်ပေါ့ဗျာ
32 ရော 64 ပါအကျူံးဝင်ပါတယ်နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်လို့ ဒီကောင်လေးက Window 8 ကိုတောင် Support
ကွန်ပြူတာမှ ပြသာနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ဖြေရှင်းနည်း
9:52 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
ဆရာ ဦးဥာဏ်ကြွယ် ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနည်း စာအုပ်လေးပါ..။
တော်ရုံ တန်ရုံ ပြဿနာကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတတ်အောင် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ိDownload ယူရန်
9:49 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
ကွန်ပြူတာ Laptop အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပါ ... ကွန်ပြူတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အသုံးပြုနည်း ပြုပြင်နည်း တွေကို အကျယ်တဝင့် ရေးထားပါတယ် လေ့လာဖတ်ရှု့သင့်တဲ့ စာအုပ် လေးမို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
9:46 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ကွန်ပြူတာအခြေခံ စာအုပ်လေးပါ။ ခုမှ ကွန်ပြူတာကို စ,လေ့လာ သူတွေအတွက် ယူထားသင့်ပါတယ်....။
TRACKS ERASER PRO V8.78 BUILD 1001
9:29 AM internet browser ဆိုင်ရာ, TRACKS ERASER PRO No comments
ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကိုတော့ အင်တာနက်ကို ဆိုင်မှာ သွားသုံးသူများဆောင်ထားသင့်ပါတယ်...။ မိမိ ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်, Password စတာတွေကိုသုံးရင် စက်ထဲမှာ ကျန်မနေခဲ့အောင် Tracks Eraser လေးကဖျက်ဆီးပေးနိုင်ပါတယ်...နက်ဆိုင်မှာ အချိန်ပြည့်လို့ ပြန်ခါနီးကျရင် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို RUN ပေးပြီး History အားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ် .. ဒါ့အပြင် မလိုအပ်တဲ့ temp files , dat file , recycle bin
စ တာတွေကိုဖျက်ပေးပြီး ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလဲ မြှင့်တင်ပေးပါတယ်... ကျန်တာတွေကို အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်
ဖုန်းကိုင်ထားသောကိုကို ၊ မမ များသိထားသင့်သော အကြောင်းအရာလေးများ
9:19 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
လူအများ စုဟာ မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှု လျှိုဝှက်တွေကို သိရှိသူတွေ အလွန် နည်းပါးနေ ပါတယ်။ ကိုင်နေ
တဲ့ လူအများစုဟာ ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို အများ အားဖြင့် Camera, Music, Bluetooth, FM, Radio. Alarm
နဲ့ Game အစရှိတာတွေ လောက်သာ အသုံးပြုနေကြတာများပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီထက်ပိုပြီး အသုံးဝင်မှုနဲ့ လျှို့ချက် အနည်း ငယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
9:15 AM internet downloadmanger No comments
IDM OPTIMIZER ကိုသုံးပြီးတော့ internet downloadmanger ကို speed
Chorme Browser မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးထည့်နည်း
9:10 AM internet browser ဆိုင်ရာ No comments
Chorme Browser မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးထည့်နည်းဆိုတာ သိပ်ပင်ပန်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး Add on လေး ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါ ထည့်ထားချင်သူများ
12:09 AM iphone ဆိုင်ရာ No comments
iphone အသုံးပြုသူတွေအားလုံးအတွက် ၀မ်းသာစရာပါ။ကျွန်တော် စာအုပ်ကောင်း
ကောင်းလေးတစ်အုပ်ရထားပါတယ်။ iphone အသုံးပြုနည်းကိုမြန်မာဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့စာအုပ်လေး
တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ပွင့်စာပေကနေထုတ်ဝေထားတာပါ။ iphone နဲ့ပတ်သတ်သမျှအကြောင်းအရာ
SOFTWARE တွေ UNINSTALL လုပ်မရခဲ့ ရင်
12:07 AM windowဆိုင်ရာ No comments
Software တွေ Uninstall လုပ်မရဘူးပြောလာလို့ တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....:)
တချို့ တွေက Game တို့Software တို့ ကို install လုပ်ပြီးခါမှ ကိုယ့် စက်နဲ့ မကိုက်လို့ Uninstall ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ခပ်လွယ်လွယ်ပြန်လုပ်လို့မရလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်ကြတာမျိုးတွေ တွေ့ နေရလို့ အဆင်ပြေအောင် ပြောပြရခြင်းပါ။ အခုပြောပြမည့် နည်းလမ်းလေးကတော့ Uninstaller software တို့ ဘာတို့ လို အချိန်ကုန်ခံ Download လုပ်ပြီးတော့ Uninstall လုပ်စရာ မလိုဘဲ ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်လို့ ရမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
12:03 AM windowဆိုင်ရာ No comments
Avast - Avast - အခမဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေး ဆော့ဗ်ဝဲတခု ဖြစ်တယ်။
Basic Input/Output System (BIOS) - ကွန်ပျူတာ တလုံးရဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ အတွင်းပိုင်း အကျဆုံး ဆော့ဗ်ဝဲ အဆင့် ဖြစ်တယ်။ BIOS က ကွန်ပျူတာ စဖွင့်ချိန်မှာ တောင်းလာတဲ့ စကားဝှက်တခုနဲ့ ကွန်ပျူတာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ဦးစားပေးချက် အတော်များများကို သတ်မှတ်ပေးတယ်။
Blacklist - တားဆီး ပိတ်ပင်ခံရတဲ့အတွက် ဖွင့်လို့ မရအောင် ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ ကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေနဲ့ တခြား အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပါဝင်တဲ့ စာရင်း ဖြစ်တယ်။
Mouse မရှိသည့်အခါ ကီးဘုတ်နှင့်အသုံးပြုနည်း
12:00 AM windowဆိုင်ရာ No comments
မိမိကွန်ပျူတာမှာ mouse ပျက်သွားလို့ဖြစ်ဖြစ် မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မောက်သုံးမှ ရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ မောက်အခက်အခဲဖြစ်နေရင် အောက်ပါဆက်တင်အတိုင်း ပြောင်းပြီး ကီးဘုတ်က သက်ဆိုင်ရာခလုတ်တွေကနေ မောက်အဖြစ် သုံးလို့ ရပါတယ်။ အောက်ပါ အဆင့်လေးတွေအတိုင်း
11:25 PM blog နည်းပညာများ No comments
အရမ်းချော အရမ်းလှ သွားအောင် ဖန်တီးပေးမဲ့ Software လေးပါ
9:05 AM photoshopဆိုင်ရာ No comments
Win RAR အသုံးပြုနည်း
9:00 AM software မြို့ တော် No comments
Flag Animation(အလံတွေ လေထဲလွှင့်နေသလို လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်)
8:56 AM software မြို့ တော် No comments
အလံတွေ လေထဲလွှင့်နေသလို လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကို လိုချင်လို့ ရှာနေတာ အခုမှပဲရှာတွေ့ တော့တယ် အောက်မှာdownloadယူလိုက်ပါ
8:49 AM software မြို့ တော် No comments
ယခုဖော်ပြတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးက အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက်များကို ပီပြင်စွာ ရွတ်ဆိုပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုပါ။ မိမိတို့ သိချင်တဲ့ အသံထွက်များကို ကွက်လက်ထဲတွင် ရိုက်ထည့်၊ သို့မဟုတ် Copy ကူးထည့်ပြီး စကားပြောကို နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ Download လုပ်ယူပါ
8:37 AM Driver Backup No comments
Driver Backup လုပ်ဖို့ဆော့ဝဲပါ။ ဝင်းဒိုးအသစ်တင်လိုသူများအတွက်
ကို Soe Win Htun တောင်းထားတာလေးပါ။ဒီနေ့ တင်ပေးမယ်လို့ ဂတိပေးထားလို့ မအားတဲ့ကြားတဲကမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ တွေ စက်တလုံးဝယ်လာတာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Laptop တလုံးဝယ်လာတာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Driver ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကို ခံစားဘူးကြမှာပါ။ တချို့က ကိုယ့်စက်မှာ ဘာ Driver version တွေ Series တွေ ဆိုတာကို မသိတော့ ရှာရခက်နေဘူးကြမှာပါ။ဝင်းဒိုးအသစ်တင်လိုသူများအတွက်တော့ driver ရှာရမယ့်အလုပ်လျော့နည်းစေအောင် ကူညီပေးမှာပါ။
Magix audio cleaning17dlx+crack
12:02 AM software မြို့ တော် No comments
အကိုတစ်ယောက်က Magix audio cleaning17 လိုခြင်တယ်ဆိုလို့ အကူအညီတောင်းတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
trial version ဖြစ်တဲ့အတွက်7ရက်ပဲသုံးလို့ ရမှပါ။ဒါကိုအမြဲတမ်းသုံးခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ download ယူထားတဲ့ file ကိုဖွင့်ပြီးcrackလို့ ရေးထားတဲ့ file တဲက CleaningLabကိုဒိုက်Cprogram file MAGIX Audio_Cleaning_Lab_17_deluxe file တဲကို copy ကူးလိုက်ပါ boxလေးတစ်ခုကြလာရင် Move and Replaceကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါပြီး
VZO Website မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်ပြီး
11:51 PM VZO No comments
9:27 AM hjsplit ဖြင့်ဖိုင်ဖြေနည်း No comments
hjsplit မရှိသေးသူများအောက်တွင် ဒေါင်းလုပ်ယူပါ၊
ဒေါင်းလုပ်ယူပြီးလျှင် အောက်တွင်ပြထားသော ဓါတ်ပုံများအတိုင်း လုပ်ယူလိုက်ပါ၊
My computer အတွင်းက Drive တွေကိုဖွင့်မရလျှင်
9:17 AM windowဆိုင်ရာ No comments
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေဘာတွေ ၀င်သွားလို့ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို သတ်ပြီးတာတောင် ဟိုဖိုင်ဖွင့်မရ ဒီဖိုင်ဖွင့်မရနဲ့ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီနည်းလေးကတော့ My computer အတွင်းက Drive တွေကို Double Click ပေးပြီးဖွင့်တိုင်း Open with ဆိုပြီးအောက်ကပုံအတိုင်း လာပေါ်နေတာကို ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ၊
iphone ထဲက phone number တွေကို sim card သို့ကူးနည်း
9:08 AM iphone ဆိုင်ရာ No comments
iphone သုံးသူတွေ တော်တော်များများ မေးမေးနေကြတဲ့ iphone ထဲက phone number တွေကို
sim card အတွင်းသို့ ကော်ပီ လုပ်လို့ရတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို တွေ့လို့ install လုပ်ပုံလုပ်နည်း နှင့်တကွ
windows နှစ်ခုထပ်ပြီးတင်မိလျှင် Boot.ini ဖိုင်အား ပြန်ပြင်နည်း
8:36 AM windowဆိုင်ရာ No comments
ဒီပြဿနာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀င်းဒိုးကို ၀င်လိုက်တာနှင့် အပေါ်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း
Windows7 တွင် Themes ကိုပြောင်းမရအောင် ပိတ်ထားချင်သူများအတွက်
7:46 AM windowဆိုင်ရာ No comments
Start > Search box သို့သွား Registry ဟုရိုက်ပါ။
ပြီးလျှင်အောက်က key အတိုင်းသွားလိုက်ပါ၊
Explorer သို့ရောက်လျှင် ၄င်းရဲ့ညာဘက်တွင် Right click ထောက်၍ New > DWORD (32-bit) Value
ကိုရွေးပါ၊ Value name ကို NoThemesTab ဟုပေးပြီး Value data တန်ဖိုးကိုတော့ 1 ပေးပါ၊ OK နှိပ်ပြီး
စက်ကို Restart လုပ်ပါ။
How to Lock Microsoft Word 2010
7:39 AM windowဆိုင်ရာ No comments
Microsoft Word 2010 ကိုတခြားသူများ ပြန်ပြင်လို့မရအောင် Password ပေးပြီး သော့ခတ်တဲ့နည်းလေးပါ။
7:27 AM windowဆိုင်ရာ No comments
Window7တွင် Autorun ဗိုင်းရပ်စ်များ မ၀င်ရောက်ခင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် Autoplay ကိုပိတ်တဲ့နည်းလေးပါ၊
Start > Control Panel > AutoPlay ကိုဖွင့်ပါ၊
How to DeleteaBlog (ဘလော့ကို Delete လုပ်နည်း)
7:24 AM blog နည်းပညာများ No comments
မိမိ ဘလော့ ကိုအရင် sign in လုပ်ပါ၊
နောက် setting ကိုနှိပ်ပါ၊
windows7 တွင်ပါလာသော Games များကို ဖျက်နည်း
6:33 AM windowဆိုင်ရာ No comments
windows7 တွင်ပါလာသောဂိမ်းများကို မလိုအပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်
hard disk space များများပိုလာအောင်ဖြစ်ဖြစ် ဖျက်ချင်ရင်တော့
DiskAid the iPhone, iPad & iPod USB Transfer +အသုံးပြုနည်း
6:13 AM iphone ဆိုင်ရာ No comments
DiskAid ကတော့ iphone,ipad နှင့် ipod Touch တို့ကို external mass storage device အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောင် access လုပ်ပေးတဲ့ tool ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ iTunes iTools တွေနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေစမ်းသုံးလို့ ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
်free software များ
11:43 PM free software များ No comments
11:38 PM blog နည်းပညာများ No comments
Mozilla Firefox Home page chane ခြင်းနှင့်မြန်မာဖေ...
BlueStacks App Player (Android app game တွေကုိုကွန...
Digital Life Journal (01-Oct-2012) (အတွဲ-၁၊ အမှတ်-...
အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်တဲ့ Internet Download Manager (...
g talk ဖုန်းပြောတာ ဒီကပြောတာမကြားရဘူး ဟိုကပြောတာကြ...
AnyReader v3.11 Build 1060 ( Install လုပ်ပုံအဆင့်ဆ...
INTERNET DOWNLOAD MANAGER (IDM) 6.12 BETA BUILD2...
iDhamma(ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ် နှင့် မေတ္တာပို့) software...
ကွန်ပြူတာမှ ပြသာနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ဖြေရှင်...
ဖုန်းကိုင်ထားသောကိုကို ၊ မမ များသိထားသင့်သော အကြော...
အရမ်းချော အရမ်းလှ သွားအောင် ဖန်တီးပေးမဲ့ Software ...
Flag Animation(အလံတွေ လေထဲလွှင့်နေသလို လုပ်တဲ့ ဆော့...
iphone ထဲက phone number တွေကို sim card သို့ကူးနည်...
windows နှစ်ခုထပ်ပြီးတင်မိလျှင် Boot.ini ဖိုင်အား ...
Windows7 တွင် Themes ကိုပြောင်းမရအောင် ပိတ်ထားချင်...
DiskAid the iPhone, iPad & iPod USB Transfer +အသုံ...